Turiizimiin biyya keessaa dagatamuun dinagdeerratti dhiibbaa qabaata
Turiizimiin biyya keessaa dagatamuun dinagdeerratti dhiibbaa qabaata Featured
Bakkeewwan turizimii daaw'achuun dinagdee biyaa bayyanachiisuudha (Haroo Wanchii)
Turiizimiin biyya keessaa dagatamaa jiraachuusaatiin sadarkaa gadaanaa irratti kan argamu ta'uu ogeeyyonni damichaa ni ibsu.
Mariin haala turiizimii biyya keessaa itti cimsuun danda'amurratti xiyyeeffatu qaamota dhimmi ilaalu hirmaachisuudhaan kaleessa Finfinneetti adeemsifame.
Sirna Dargii keessa turiizimii biyya keessaa cimsuuf sochiin ture olaanaa ta'uu kan himan ogeessiifi barsiisaan turiizimii Dr. Ayyaallewu Sisaay, kibaboota “biyya kee bari” jedhaman manneen barnootaafi iddoowwan gara garaatti hundeessuudhaan kaka'umsi cimaan uumamuusaa dubbatu.
Haalli sun garuu yeroorraa yerootti gadi bu'aa dhufuudhaan ammaan tana biyya alaa malee namni biyyasaa daaw'achuuf fedhii qabu muraasa ta'uusaafi kanaafis dhalootni duubaa dhufu iddoowwan hawata turiizimii biyya keessaa dagachaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.
Waan ta'eefis qaamotni dhimmi ilaallatu hundi keessumaa mootummaan turiizimii biyya keessaa jajjabeessf tarkaanfiilee gara garaa fudhachuu akka qabus gaafataniiru.
Bakka turiizimiin biyya keessaa hincimnetti isa biyya alaa cimaafi itti fifiinsa qabu horachuun kan hindanda'amne ta'uu kan himan immoo ogeessi turiizimii biraan Obbo Taaffasaa Saahleeti. Isaanis dagatamuu turiizimii biyya keessaatiin biyyattiin galii heddu dhabaa kan jirtu ta'uu dubbatu.
Iddoowwan hawata turiizimii ta'an hunda misoomsuufi beeksisuun hojii itti fufiinsaan hojjatamu ta'uu kan himan daarektarri ittaanaan Dhaabbata Daldala Turiizimii Biyyaalessaa gargaaraa Pirofeesara Yachaala Mihrat gamasaaniin, dhaabbannisaaniis ta'e mootumaan rakkoo kana hubachuudhaan furmaatasaatiif hojjachaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.
Rakkoolee nageenyaa yeroowwan gara garaatti uumamaa turaniin sochiin turiizimii biyya keessaas ta'e alaa gufachaa turuusaafi ammaan tana immoo gara kallattii sirriitti deebi'aa jiraatus turiizimiin biyya alaa garuu qindoomina dhaabbilee daawwachiiftota turiizimiifi ogeeyyota damichaa hunda kan barbaachisu ta'uu dubbatu.
Wayitii ammaa dhaabbileen daaw'achiiftota turiizimii 606 ta'an hojicharratti bobba'an yoo ta'u, gatamaa dhufuun turizimii biyya keessaa dinagdeerratti dhiibbaa waan qabaatuuf industiriin aara maleessi kun deebi'ee akka bayyanatuuf xiyyeeffannaan irratti hojjechuu barbaachisa.
Torban kana/This_Week 7707
Guyyaa mara/All_Days 1817127